Google Earth Injini, iyo kabhoni tsoka yekuongorora chishandiso uye seti yemasaiti satellite kubva kuGoogle Cloud | Linux Vakapindwa muropa
Google Earth Injini, iyo kabhoni tsoka yekutsvagisa chishandiso, uye suite yeGoogle Cloud satellite mifananidzo
Darkcrizt | 13/10/2021 18:47 | Noticias
Google Cloud ine akawanda maturusi kubatsira vashandisi kuita mhinduro dzakasiyana siyana uye vachangoburitsa chishandiso chitsva kuti vanzwisise zvirinani shanduko mukukanganisa kwezvakatipoteredza sechikamu chekambani kuyedza kurwisa shanduko yemamiriro ekunze.
Uye ndizvo izvozvo Google ikozvino ichazivisa vatengi vayo vegore nezve kabhoni mosi inosanganisirwa nekushandisa kwavo kubva mugore uye ndichavhura satellite mifananidzo kwavari kekutanga kuti vaongorore zvakatipoteredza, sechikamu chekutanga kubatsira makambani kuteedzera uye kudzikisa yavo bhajeti bhajeti. Aya matsva maficha chikamu chezviziviso zvakaitwa neGoogle Cloud kukanzura musangano wayo wepagore wevatengi, unoitika gore rino zvakanyanya nekuda kwedenda.
Iko kabhoni tsoka tsoka inoratidza kuburitsa kwakanyanya kabhoni kwakabatana nemagetsi kushandiswa kubva mukushandiswa kweiyo gore chikuva uye inoratidza emissions nekufamba kwenguva uye iwe unogona kupaza iyo data neprojekti, chigadzirwa, nedunhu.
Makambani anogona kuisa ruzivo urwu mune yavo data emissions yekuongorora kwemukati uye kugadzira kabhoni kuburitsa (ivo vanogona kutumira kunze data ku Salesforce Sustainability Cloud, semuenzaniso). Google yakacherekedza kuti huwandu hunoreva kuburitsa kabhoni yemushandisi.
Mepu nyowani inopa, Google Earth Injini, yakange yashandiswa nemakumi ezviuru zvevaongorori, hurumende nemapoka kumanikidza kubvira 2009. Asi ikozvino Google inobvumidza makambani kuwana sevhisi, iyo inosanganisira akawanda seti yedhata, senge makuru geospatial dhata senge Landsat uye software inofanirwa kuiongorora. Zvakakoshawo kuziva kuti Amazon yatora danho rakafanana.
Uye ndezvekuti vakuru vekuMadokero vanopa gore komputa masevhisi, anoti Google, Microsoft neAmazon, vanga vachikwikwidza kwemakore mukusimudzira zvinopihwa. Chinangwa chayo kushandira makambani ari pasi pekumanikidzwa kubva kune vane chekuita kuti vafungisise mashandiro avo vachiona shanduko yemamiriro ekunze.
Pamusoro pazvo, Google Cloud ichatarawo zvishandiso zvisiri kushandiswa, pamwe nekuburitswa kwayo kabhoni, chinova chirongwa chakanakisa cheGoogle kuratidza kubvisa mafomu anoonekwa neanokurudzira kubva kumapurojekiti asina hanya, izvi hazvizongobatsira chete makambani kudzikisira njodzi dzekuchengetedza, asiwo kukwanisa kudzikisa mutengo uye kudzikisa kabhoni yako. tsoka.
"Takaona kuti sevhisi iyi inogona kushandiswa kune mazhinji emabhizimusi mikana," akadaro Jen Bennett, CTO weGoogle Cloud.
Earth Injini inogona kubatsira kuve nechokwadi chekusimudzira kwemaketani ekupa uye kufungidzira matambudziko ekushanda inosangana nemamiriro ekunze ekunyanyisa, maererano neGoogle. Unilever Plc, iyo yanga ichiedza tekinoroji kwemwedzi gumi nembiri yapfuura, yakaongorora manyuko ayo emafuta emuchindwe muIndonesia, asi zvaisakwanisika kuziva kana izvi zvakakonzera shanduko mukuita.
Chishandiso chitsva cheGoogle chekutsvagisa kabhoni, chakafanana neicho chakapihwa neMicrosoft, chinoratidza choutsi chine chekuita nemagetsi anoshandiswa kuchengeta nekugadzirisa data revatengi. Pamusoro pezvo, Google ikozvino inonyevera vatengi pavanopedza simba pane isina basa gore masevhisi.
"Ichi chinhu chatinoziva kuti chinogona kushandiswa kune mazhinji emabhizimusi mikana," akadaro Jen Bennett, technical director weGoogle Cloud.
Sekureva kweGoogle, Earth Injini inogona kubatsira kuve nechokwadi chekuchengetedzwa kwemaketani nekufungidzira mashandiro ekuita kubva kune yakanyanya mamiriro ekunze.
Semuenzaniso, Unilever Plc, iyo yanga ichiedza tekinoroji kwemwedzi gumi nembiri yapfuura, yakatsvaga kuwanikwa kwayo kwemafuta emuchindwe muIndonesia, kunyangwe zvaisagona kuongororwa kuti izvi zvakakonzera shanduko mukuita.
Chekupedzisira, kana iwe uchifarira kugona kuziva zvakawanda nezvazvo nezveGoogle Earth Injini, unogona kutarisa ruzivo rwayo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google Earth Injini, iyo kabhoni tsoka yekutsvagisa chishandiso, uye suite yeGoogle Cloud satellite mifananidzo
Qbs 1.20 inouya nekutsigirwa kunatsiridzwa kweC, C ++, rutsigiro rweQT 6 uye nezvimwe
Kodi 19.2 inosvika pamwe nekuvandudzwa muWindows, PVR uye zvimwe zvinogadziriswa